Ndiyathemba @ Bhopal - I-Airbnb
Ndiyathemba @ Bhopal
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguMadhur
Indawo yam ikufuphi ne-DB Mall, iMp Nagar Zone II, uhamba ukusuka kwisikhululo sikaloliwe, i-shaurya samark, umbindi wesixeko, iimbono ezintle. Uya kuyithanda indawo yam ngenxa yemibono, indawo, abantu, siyaluthanda undwendwe lwethu !!,, i-ambience, uyilo, iibhedi, inkqubo yeshawari, amachibi okubhukuda. indawo yam ilungile izibini, adventurers solo, abahambi zoshishino, iintsapho (kunye nabantwana), kunye groups.ukwazi enkulu ukubhukisha yonke indawo max 30 abantu neebhedi ezongezelelweyo kunye neentlawulo emva 16 guest ar
Indawo yethu yeyangoku, inezinto ezininzi zoyilo, sineebhedi ezitofotofo kakhulu, inkqubo yeshawari yemvula yaseGrohe, igumbi lokuhlambela elifakwe iJaquar, amachibi amabini ePlunge, siyathanda ukuba nobuhlobo kwi-Eco ngoko ke sinenkqubo yokufudumeza amanzi ngelanga. Ezantsi kwethu sineChai#34 iTea cafe apho unokonwaba khona iindidi ezingama-22 ezahlukeneyo zeTea ezinesitayile sodongwe semagi "Kulhad". Sikufutshane neyona mall inkulu eBhopal "D.B Mall", iziko lezorhwebo MP Nagar. Ngapha koko sinokukunceda ucwangcise uhambo lwakho kufutshane eBhopal. I-Bhopal iyamangalisa, sindwendwele ukuze ufumane idolophu yamachibi.
4.70 · Izimvo eziyi-96
Iphantse yasentliziyweni yeBhopal. Izakhiwo ezikufutshane ziphantse kuthi kuphela, indlela yayo ijonge, ikulungele ukuhamba, iindawo zokutyela ezininzi, ii-pubs, imivalo ziphaya ngaphaya kwendlela. Singakwazi nokucwangcisa ukutya ukuba uyafuna.
Umbuki zindwendwe ngu- Madhur
sifuna ukuba undwendwe lwethu luzive lukhululekile, kwaye sazi ukuba ngumhlobo wabo okhoyo ukuze amhoye. Singakuthatha kwakhona iindawo ezisingqongileyo.